Umndeni | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Konke Udumo Nemali Emphakathini Umsebenzi Nokuphila
5 Wesihloko Sobufakazi
UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuva. Ngangizimisele ukwamukela noma yibuphi ubunzima inqobo nje uma lokh… Umbhalo Ogcwele
UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Abalungile baba ngabokugcina” amazwi engiwajwayele kakhulu. Mina nomyeni wami sasingabantu abangenabuqili: Uma kukhulunywa ngezint… Umbhalo Ogcwele
UKemu Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ngalokhu ngoba, omakhelwane bami babeke bangincome phambi kwabazali ba… Umbhalo Ogcwele
UWu You Edolobheni laseHechi, EsiFundazweni saseGuangxi Esikhathini esithile esidlule, ibandla langihlelela ukuba ngiyohlala nomndeni owawuzongisingatha ngezizathu zomsebenzi. Uma ngiqala ukuhlanganyela n… Umbhalo Ogcwele
UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalokho umndeni wethu wawumbalwa ngokwesibalo, ngakho sasiq… Umbhalo Ogcwele